चियाको आम्दानी १४७ प्रतिशतले वृद्धि : घट्यो अलैंची, अदुवामा सामान्य सुधार — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > चियाको आम्दानी १४७ प्रतिशतले वृद्धि : घट्यो अलैंची, अदुवामा सामान्य सुधार
चियाको आम्दानी १४७ प्रतिशतले वृद्धि : घट्यो अलैंची, अदुवामा सामान्य सुधार
सरकारले प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याए पनि चियाको निकासीमा सुधार नहुँदा सधैं चियाको तथ्यांक ऋणात्मक हुने गथ्र्यो तर यस वर्षको शुरुआतसँगै चियाको निकासी १४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक छ ।
गएको आर्थिक वर्ष २०७६र ७७ को (साउन–भदौ) मा रू. ६४ करोड २३ लाख १ हजार बराबरको चिया निकासी भएकामा यस आव (साउन–भदौ) मा रू.१ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख ५७ हजार मूल्य बराबरको चिया निकासी भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले बताएको छ ।
केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गएको आव २०७६र ७७ मा २३ लाख ५० हजार ७९० किलो चिया निकासी भएकामा यस आवमा बढेर ५३ लाख १७ हजार ५८२ किलो चिया निर्यात भएको छ । चियाको निकासी र आम्दानी ह्वात्तै बढ्नुका कारण भने भारतमा चिया उत्पादन कम हुनु भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
मैनालीका अनुसार नेपालका चिया किसानले चियाको उल्लेखीय मूल्य पाएकाले बढी निकासी भएको हो । निकासी बढे पनि नेपालमा चियाको उत्पादन भने नबढेको सरोकारवालाको भनाइ छ । गएको आर्थिक वर्ष कोरोनाका कारण निकासी नभएको चिया पनि यस आव निकासी हुँदा तथ्यांक बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
चियाको निकासी सधैं अस्थिर रहने भएकाले पनि घटबढ भइरहन्छ । तर यस वर्षको शुरुमा भने अत्यन्त बढी अन्तर आएको छ । जुन अन्तरका कारण नेपालमा निकासी हुने वस्तुको दोस्रो बढी निकासी हुने वस्तुमा चिया परेको छ । वर्षको शुरुमा अन्तर बढे पनि वर्षभरको तथ्यांकमा फरक नपर्ने बताउँछन्, केन्द्रीय चिया सहकारी संघका महासचिव रविन राई ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आव २०७४र ७५ मा १ करोड ५६ लाख ८४ हजार ५४४ किलो चिया निर्यात भएकामा गत आव २०७५र ७६ मा १ करोड ५० लाख ४३ हजार ७९६ किलो निर्यात भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यसरी हेर्दा गत आवमा ६४ हजार ७४८ किलो चिया निकासी कम भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्षको शुरुमा अलैंचीको निकासी गएको वर्षको तुलनामा घटेको छ भने अदुवाको तथ्यांक भने सामान्य बढेको छ । गत आव २०७६र ७७ (साउन–भदौ) मा रू. ११ करोड ८३ लाख ५० हजार मूल्यको अदुवा निकासी भएकामा यस आव (साउन–भदौ) मा रू. १३ करोड ८४ लाख ७२ हजारको अदुवा निकासी भएको छ ।
केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गत आव (साउन–भदौ) मा २२ लाख ५९ हजार ४३१ किलो अदुवा निकासी भएकामा यस आव (साउन–भदौ) मा २८ लाख ७९ हजार १०० किलो निकासी भएको छ । अदुवाले गत आवको तुलनामा १७ प्रतिशत आम्दानी वृद्धि गर्दै कुल निकासीको शून्य दशमलव सात प्रतिशत ठाउँ ओगट्न सफल भएको छ ।
यता अलैंचीको तथ्यांकमा भने सामान्य सुधार भए पनि गएको आवको तुलनामा घटेको देखिन्छ । गएको आव २०७६र ७७ (साउन–भदौ) मा रू.१ अर्ब २ करोड ५९ लाख ८९ हजारको अलैंची निकासी भएको छ भने यस आव २०७७र ७८ मा रू. ९६ करोड ७ लाख १६ हजार मूल्यको निकासी भएको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६र ७७ (साउन–भदौ) मा १२ लाख ७५ हजार २९४ किलो अलैंची नेपालमा निर्यात भएकामा यस आव २०७७र ७८ (साउन–भदौ) मा १२ लाख ८४५ किलो अलैंची निर्यात भएको केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ ।
विभिन्न समस्याले अलैंचीको भाउमा गिरावट आएकाले पनि परिमाण र आम्दानी खुम्चिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । कोरोनाका कारण किसान र व्यवसायीसँग भण्डारणमा रहेको पुरानो अलैंची बाहिरी देशमा निकासी नभएकाले घटेको अलैंची व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार कार्कीको भनाइ छ । गत वर्षको अलैंची निकासी नभएको र यस वर्षको अलैंची उत्पादन भइसकेकाले पनि अलैंची सुधार नभएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।
यस्तै वर्षेनी अलैंचीको भाउमा गिरावट आएकै कारण पनि आम्दानी घटेको अलैंची व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सचिव मातृका घिमिरेको भनाइ छ । पाँच वर्षअघि अलैंचीको मूल्य रू.१ लाखप्रति मन (४० किलो) भएकामा अहिले प्रतिमन रू. २० देखि ३० हजारको अनुपात छ ।
यसरी अलैंचीको विक्री मूल्य घटेकाले पनि आम्दानी घटेको घिमिरेको भनाइ छ । यस आर्थिक वर्षमा कृषिजन्य पदार्थले कुल ३२ दशमलव छ प्रतिशत ओगटेको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
२०७७ असोज ३० गते १०:१८ मा प्रकाशित
बाँडफाँट भयो सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओ, कतिले हात पारे ? कतिको खाली ?
२५ अर्बमा दुईवटा ठूला जहाज किन्न निगमले ल्यायो अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर !
वन कार्यालय काठमाडौँले भूकम्पपीडितलाई काठ उपलब्ध गराउन नसक्ने
अदालतले श्रीमतीलाई सारी उपहार दिन आदेश दिएपछि…..
म्याग्दीमा ‘छोरी पेवा बचत’ कार्यक्रम, छोरीलाई मासिक सय रुपैयाँ दिने